Naya Bikalpa | नेविसंघको ब्यानरमा गुटैपिच्छे सभा, ४९ औं वार्षिकोत्सव खल्लो - Naya Bikalpa नेविसंघको ब्यानरमा गुटैपिच्छे सभा, ४९ औं वार्षिकोत्सव खल्लो - Naya Bikalpa
नेविसंघको ब्यानरमा गुटैपिच्छे सभा, ४९ औं वार्षिकोत्सव खल्लो
प्रकाशित मिती: २०७६ बैशाख ८, १०: ४६: ११
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले ४९ बर्षको इतिहासमा पहिलो पटक बैशाख ६ गते यो बर्ष केन्द्रीय कार्य समिति बिना नै बार्षिकोत्सव मनाएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले गत माघ २९ गते नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्षबाट नैनसिंह महरलाई राजिनामा दिन लगाएर नेविसंघ भंग गरेका हुन् ।
नेविसंघ केन्द्रीय समिति भंग भएपनि नेता र गुटैपिच्छेका नेविसंघले राजधानीमा बेला बेला कार्यक्रम त गर्दै आएका थिए । तर, यस पटक नेविसंघको ४९ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा राजधानीमै दुई वटा कार्यक्रमहरु भए । नेविसंघ जिल्ला समिति काठमाडौंका अध्यक्ष मनोज बैद्यले पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको निर्देशनमा आयोजना गरिएको कार्यक्रम भन्दै शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा सभाको आयोजना गरे ।
पार्टीका पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंह निकट भनेर चिनिएका बैद्यले कार्यक्रम आयोजना गरेपछि प्रमुख अतिथिको रुपमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई आमन्त्रण गरेका थिए भने विशेष अतिथिमा उनै सिंह र पार्टी महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई राखेका थिए ।
रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षधर नेताको खडेरी परेको सो कार्यक्रम शुरु नहुँदै प्रमुख अतिथि देउवा आफ्नो पाँच मिनेट लामो भाषण ठोके र वाहिर जानुछ भन्दै वाहिरिए । देउवा वाहिरिएपछि आसनग्रहणमा मर्यादा मिचेको भन्दै नेता पौडेल निकटका मनोजमणी आचार्यले कार्यक्रम बहिस्कार नै गर्नुभएको थियो । आचार्य नेविसंघको ११ औं महाधिवेशनमा पौडेलसमूहबाट अध्यक्षको प्रत्यासी हुनुहुन्थ्यो ।
नेता रामचन्द्र पौडेल निकटका विद्यार्थीले नेविसंघको वार्षिकोत्सवमा कुनै कार्यक्रम आयोजना गरेन । तर अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निकटका नेविसंघका निवर्तमान महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले प्रमुख अतिथि भएर धुम्वाराहीको एक पार्टी प्यालेसमा खुल्ला बहस कार्यक्रम भनेर आयोजना गरे । एक घण्टाको फरकामा नेविसंघका दुई कार्यक्रम भएपछि नेविसंघका शुभेच्छुक र कार्यकर्तामा अन्योलता छाएको थियो । आफ्नो समूहसँग असहमत राख्ने नेताहरुको बहुमत भएपनि नेविसंघ भंग गरेका सभापति देउवालाई यतिवेला नेविसंघ टाउको दुखाइको बिषय भएको छ ।
नेविसंघको महाधिबेशन निर्धारित समयमा होला र आफ्नो पक्षले पराजय भोग्छ भन्ने निश्चित भएर डराएका सभापति देउवाले एक बर्षअघि पार्टी एकीकरण भएको फोरम लोकतान्त्रिकबाट आएका बिद्यार्थीलाई समेट्ने नाममा क्याम्पस र क्षेत्रिय अधिवेशन स्थगित गर्न लगाएका थिए । करिव १४ जिल्लाको महाधिवेशन समेत सम्पन्न भएको अवस्थामा नेविसंघलाई खेलौना बनाएका सभापति देउवाले नेविसंघ केन्द्रीय कार्यसमितिले सर्बसम्मतले निर्माण गरेको बिधानलाई रद्धिको टोकरीमा फ्याकेर नयाँ विधान प्रस्तुत गरेका थिए ।
देउवाले नेविंघको बिधानको एउटा मात्र दफा पारित गर्न लगाएर नेविसंघको उमेर हद ३२ बर्ष हुने निर्णय केन्द्रीय कार्य समितिबाट पारित गरे । जुन निर्णयप्रति नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र पौडेल लगायतले लिखित असहमति नै जनाएका थिए । विवादका बीच पारित भएको बिधान कार्यान्वयन हुने स्थिति आएपनि पार्टी संस्थापन समूहले आफू निकटका पदाधिकारीलाइृ राजिनामा दिन लगाएका थिए ।
माघ २ गते आईनपुग्दै महामन्त्री सरोज थापा र उपसभापति पुष्पकुमार शाहीसहित आठ जनाले राजिनामा दिएका थिए । अन्ततः सभापति नैनसिंह महरलाई माघ २९गते राजिनामा दिन लगाएक देउवाले तदर्थ समिति गठन गर्न सकेका छैनन् । र , त्यसैले अब नेविसंघको तदर्थ समिति गठन गर्न धौ धौ परेको छ ।
सभापति देउवा निकटका विद्यार्थी नेता सबैजसो ३२ बर्ष उमेर कटेका मात्र भएपछि देउवा समस्यामा परेका हुन् । त्यसैले नेविसंघको बार्षिकोत्सवको अवसरमा देउवाले भने आफूभन्दा सिनियरलाई एक पटक अवसर दिन तयार भए ३२ बर्ष उमेर कटेकालाई नै नेतृत्व दिने घोषणा गरे । सभापति देउवाको यो भनाईले उनी ३२ बर्षमाथिकालाई नै त्यो अवसर दिन चाहन्छन् । त्यसैले देउवा यतिवेला नेविसंघको विषयलाई लिएर कहिले कता कुन गुट त कहिले कुन गुटका नेतालाई समाउँदै हिँडेका छन् ।
यसअघि देउवाले ४५ बर्ष उमेर कटेका नेविसंघका पूर्वउपाध्यक्ष ऋषिकेशजंग शाहले आयोजना गरेको ११ विद्यार्थी संगठनको कार्यक्रममा आफै उपस्थित भएका थिए । उनले शाहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपस्थित भएर ३२ बर्षमाथिकोबाट नेविसंघ तदर्थ समिति गठन गर्नु पर्ने भएमा शाहलाई नै अघि सार्ने निश्चित छ ।
२०२७ सालमा भद्रगोल जेलभित्रै तत्कालिन नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले औपचारिक रुपमा उद्घाटन गरेको नेपाल विद्यार्थी संघको पहिलो महाधिवेशनबाट अहिलेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विजयी भएका थिए । देउवापछिका नेविसंघ अध्यक्षहरु हाल पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारी र सदस्यहरु छन् ।
उपसभापति विमलेन्द्र निधि, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, केन्द्रीय सदस्यहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बलबहादुर केसी, बालकृष्ण खाँड, एनपी साउद, धनराज गुरुङ, गोविन्द भट्टराई, गुरुराज घिमिरे प्रदीप पौडेल कल्याण गुरुङ सबै नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
त्यस्तै हालका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्यहरु डा. रामशरण महत, डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल, नविन्द्रराज जोशी, दीपक गिरी, चन्द्र भण्डारी, हृदयराम थानी, गगन थापा, बद्रीप्रसाद पाण्डे र सरिता प्रसाईँ त्यसवेला नेविसंघको पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो । यति धेरै पदाधिकारी पार्टी नेतृत्वमा गए पनि नेविसंघ भैग भएको तीन महिना वित्न लाग्दा समेत नेविंघको तदर्थ समिति बन्न नसक्नु बिडम्वना नै भएको छ ।
२०७६ बैशाख ८, १०: ४६: ११